Plumbing & Sanitary System > Total Bots M&E Engineering
09 420 053 362 [email protected]
Air-Condition & Mechanical Ventilation System (ACMV)
ELV ( Extra Low Voltage )
Home » Service » Plumbing & Sanitary System
What is M&E in Construction?
Construction projects များတွင် M&E သည်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ M&E ဆိုသည်မှာ Mechanical System နှင့် Electrical System နှစ်ခု ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေအိမ်၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ အဆောက်အဦးများ၏ အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်းရှိ စက်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာစနစ်တွေကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦးတစ်ခုကို ဆောက်လုပ်ရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဗိသုကာပညာရှင်တွေက Building Design နှင့် Decoration အပိုင်းတွေကိုတာဝန်ယူရသလို အဆောက်အဦး၏ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ ရေသန့်နဲ့ရေဆိုး၊ Aircon System နှင့် မီးသတ်စနစ် အစရှိတဲ့စနစ်များကိုလဲ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦးတွေအတွက် M&E ရဲ့တာဝန်နဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်အလက်တွေကအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါသည်။
အဆောက်အဦးတစ်ခုမှာ နေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့သောက်ရေနဲ့ သုံးရေရရှိခြင်း ၊ စွန့်ပစ်ရေနဲ့ ရေဆိုးတွေကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပေးခြင်းတို့အတွက် Plumbing & Sanitary System တွေကလဲ မပါမဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်။
သောက်ရေနဲ့သုံးရေတွေကိုစနစ်တကျဖြန့်ဝေပေးတဲ့ Water Distribution System ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ သန့်စင်တဲ့ရေကောင်းရေသန့်ရရှိဖို့ Water Treatment System အညီ မီးဖိုချောင်၊ရေချိုးခန်းမှထွက်တဲ့စွန့်ပစ်ရေများ၊ ရေဆိုး (မိလ္လာ) အညစ်အကြေးများကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်တဲ့ Sanitary System များကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
Total Bots M & E Engineering Company ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ပြီး အိမ်၊ ရုံးခန်းများကို Mechanical နှင့် Electrical System များကို Design တွက်ချက်ပေးခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းစသည်တို့ ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
No.25 (A/2), Than Street,7Quarter, Hlaing Township, Yangon.
09 420 053 362, 09 457 660 509, 09 977 019 711
Copyright © 2022 Total Bots M&E Engineering. All Rights Reserved.